Fanamoriana ary manamboatra milina mpanamboatra sy milina mpanamboatra
Home / Magnetic Grinding Machine / Masinina mihena sy milina poloney
Famaranana ny famokarana solika sy polisy
Sokajy: Magnetic Grinding Machine Tags: milina fanosotra mihetsika, milina deburring milina, poloney fanodikodinana andriamby, fitaovana fanamboarana magnetika, magnetic grinding machine, milina fanosotra simika
Fitsipika momba ny masinina sy ny poloney
Masinina fitotoana andriamby (milina fanesorana sy milina poloney) Ampiasao ny hery mahagaga avy amin'ny saha maitso mba hahatonga ireo tsangam-bolongana tsy milamina hikororosy haingana, ary ny pin-de-burr, manadio sy manadio ireo asa vita tsara sy tsara. Ity milina ity dia tsy manimba ny tontolo iainana rehefa miasa.
Masinina fikosoham-bary (masira fanodinana ary milina poloney) famaritana
The Masinina fikosoham-bary (masinina fanodinana & milina poloney) Ny SUPER lehibe maraotra mofomamy natao, ho an'ny mass-mitoto vary, Nikosokosoka na fanadiovana. The magnetic grinding machine dia mandeha ho azy faingana, ny olona iray dia afaka mampiasa milina maro.
Masinina fitotoana andriamby (milina fanesorana sy milina poloney) ampiasao ny hery mahagaga avy amin'ny saha maitso mba hahatonga ireo tsipika vy tsy havanana hikororosy haingana, hikoropaka, manadio sy manadio ireo tsangan-tsoroka amin'ny fomba mahomby sy mazava tsara.
Ny milina fitotoam-bolo (milina fanesorana sy milina poloney) Ny tontolo iainana ara-tontolo iainana, NO ny fandotoana. Izy ireo dia -mitoto varyary polisy haingana, mahomby. Manana fahafaha-manao tsara izy ireo amin'ny famoahana haingana sy avo lenta -mitoto vary ny lavaka kely anatiny, ny fantsona anatiny, ny tsipìka, sns. Aza manimba ny asan'ny arofanina, ary TSY misy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny arofanina.
Magnetic grinding machines dia asa tsotra sy azo antoka ary mora vidy sy lava-miasa.
Ny vokatra avy amintsika milina mozika dia mety -mitoto vary, de-burring, manakona sy manaparitaka ny karazam-borona rehetra, ny vy, ny plastika henjana, sns milina mozika dia ampiharina amin'ny indostrian'ny horologe, solomaso, fanamboarana hidy, firavaka sy firavaka, elektronika, zavakanto, milina ary fitaovana sns.
Ny firavaka, ny asa-tànana, ny fanangonana, ny lathe mandeha ho azy dia ampahany, fanariana maty, ampahany amin'ny milina fanoto, lohataona lohataona sy shrapnel, elektronika, fifandraisan-davitra, fantsom-pahasalamana
1. Mety amin'ny vy vy maivana, vy tsy vy ary ampahany sarobidy amin'ny paikady.
2.Realizing multi-effec toy ny burr wlimination, aoriana zoro,Nikosokosoka sy ny fanadiovana sns
3.Nikosokosoka maty zoro faritra tsy ara-dalàna, tubular,
4.blending fotoana, haingam-pandeha, fandidiana mora sy azo antoka
5.Adjustable dia afaka mamaly ny fitakiana polishing rehetra
6.Tsy misy zoro maty rehefa milelaka
7.Famaranana fampahatsiahivana, afaka mampatsiahy izy rehefa vita ny poloney, afaka mifehy maromaro ny olona
8.Volage, ankehitriny, matetika sy fotoana dia mora azo
9.Nikosokosoka ny fizotrany tsy mila asan'olona miditra an-tsehatra
Masinina fikosoham-bary (milina fanodinana & milina fandefasana) dia manala ny tara-nify na voamaina ao amin'ny faritra, mandevona ary mamita ireo faritra ao anatin'ny fotoana fohy. Ny milina no tena azo ampiasaina indrindra ho an'ny faritra miaraka amin'ny lavaka anatiny, endri-pitenenana, lembalemba na kofehy. Ny milina polarin'ny angovo dia tsy handratra ny faritra amin'ny faritra, ary tsy manova ny fahamarinan'ny faritra rehefa vita. Mora miasa ny milina ary ilaina ny 5 ~ 20 minitra ho an'ny faritra. Masinina fikosoham-bary (milina fanodinana & milina fandefasana) Afaka mamita ny ampahany amin'ny fitaovana metaly sy ny plastika mafy.